7000 Series Aluminum firaka Plate - China Hangzhou Jinding Aluminum
Custom Solution Guoxin tena manome andian-dahatsoratra 2000, 6000 ary 7000 andian-dahatsoratra andian-dahatsoratra firaka takelaka aluminium, 1000 ihany koa ny andian-dahatsoratra ny andian-dahatsoratra 7000 aluminium firaka fantsona sy ny hazo amin'ny folo taona mahery 'traikefa. Mba lazao anay ny zavatra ilaina toy ny firaka aluminium kilasy, sy ny hafanana fepetra arahana fitsaboana ity andiany 7000 aluminium firaka, ny orinasa dia afaka manome aluminium firaka dingana vahaolana mba ho fanaon'ny miendrika aluminium firaka vokatra. Ny Recommend Aluminum firaka Products 7075 Aluminum firaka plat ...
Guoxin no tena manome andian-dahatsoratra 2000, 6000 ary 7000 andian-dahatsoratra andian-dahatsoratra firaka takelaka aluminium, 1000 ihany koa ny andian-dahatsoratra ny andian-dahatsoratra 7000 aluminium firaka fantsona sy ny hazo amin'ny folo taona mahery 'traikefa. Mba lazao anay ny zavatra ilaina toy ny firaka aluminium kilasy, sy ny hafanana fepetra arahana fitsaboana ity andiany 7000 aluminium firaka, ny orinasa dia afaka manome aluminium firaka dingana vahaolana mba ho fanaon'ny miendrika aluminium firaka vokatra.
7075 Aluminum firaka Plate
7050 Aluminum firaka Plate 7050 aluminium firaka ho an'ny fanaovana fiaramanidina faritra ara-drafitra toy ny aizim-firaka takelaka aluminium, extrusion faritra, na haba miendrika ho faty forgings sy forgings. Io karazana aluminium firaka manana fanoherana ny harafesiny avo, mba hanamafisana harafesiny fanoherana famoretana, ka reraka ny fanoherana, ary koa ny mikasika ny Fahasarotana tapaka avo.
7A04 Aluminum firaka Plate 7A04 aluminium firaka ho an'ny fanaovana fiaramanidina hoditra, screws, ary enta-mavesatra faritra ara-drafitra tahaka ny andry girder, toe, elatra taolan-tehezany, fanjaitrany, na hipetrahan'ny fitaovana, sns
Guoxin dia afaka manolotra 7000 Series Aluminum firaka Takelaka toy izao manaraka izao:
7A04 Aluminum firaka Plate
7005 Aluminum firaka Plate
7039 Aluminum firaka Plate
7049 Aluminum firaka Plate
7072 Aluminum firaka Plate
7175 Aluminum firaka Plate
7178 Aluminum firaka Plate
7475 Aluminum firaka Plate
Previous: 6000 Series Aluminum firaka Plate